Gaas “ Doorashooyinka Federaalka waxay u dhacayaan qaab ka duwan 4.5” – Radio Baidoa
Gaas “ Doorashooyinka Federaalka waxay u dhacayaan qaab ka duwan 4.5”
Madaxweynaha Puntland, Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo maanta shir guddoomiyay shirka toddobad -laha ah ee golaha wasiirrada Puntland , wuxuu ka jeediyay warbixin ku saabsan shirka amniga qaran ee dhawaan lugu soo gabagabeeyay magaalada Baydhabo.
Cabdiweli Gaas , wuxuu xaqiijiyay doorashada guud ee Federaalka marka la gaaro sannadka 2020 inan loo noqon doonin qaababkii hore ee lugu geli-jiray doorashooyinka gaar ahaanna nidaamka 4.5.
“ Shirkii Baydhabo waxaa lugu heshiiyay dhisidda ciidan astaan qaran leh oo ka fog hayb iyo gobol.. waxaa is-fahan laga gaaray habka wadaagga kheyraadka Soomaaliya gaar ahaan macdanta iyo shidaalka , iyadoo hannaanka Federaalka loo marayo.” ayuu yiri madaxweynaha Puntland oo inta ku daray “ Nidaamka geeddi socodka doorashooyinka 2020 ee Soomaaliya, waxaa lugu heshiiyay inan loo noqon doonin qaababkii hore ee lugu geli jiray doorashooyinka gaar ahaanna 4.5.”
Shirka wasiirrada Puntland oo qodobbo dhowr ah looga hadlay, waxaa loo qeybiyay golaha wasiirrada xeerka biyaha Puntland xeerkaas oo qeexaya ilaalinta iyo dhaqaaleynta keydka kheyraadka biyaha wuxuuna si gaar ah u xoojinayaa maareynta iyo horumarinta adeegga biyaha Puntland.
Farmaajo oo la kulmay kaaliyaha Xoghayaha QM u qaabilsan arrimaha siyaasadda
Golaha ammaanka oo dalab u diray maamulada Somaliland iyo Puntland